I-HTC iyeke ukuthengisa iifowuni zayo kwiivenkile ezahlukeneyo e-China | I-Androidsis
Ubukho be-HTC kwintengiso buyehlile kakhulu kule minyaka idlulileyo. Iziphumo zokuthengisa ezimbi zibangele ukuba kuncinci into eyenziweyo kwicala labo kwaye kwezinye iimarike bathathela ingqalelo ilayisensi yophawu lwabo, njengendlela yokunciphisa iindleko zakho. Ukongeza, inkampani ingaqala ukuyeka ukuthengisa kwezinye iimarike, isicwangciso esibonileyo kutsha nje kwenye inkampani esenkingeni. njengoSony.
Ngoku kuza ulwazi olutsha malunga ne-HTC. Ukusukela inkampani bayeke okwethutyana ukuthengisa iifowuni zabo e-China. Ezinye zevenkile ezinkulu elizweni ziya kuyeka ukuzithengisa. Okwangoku zinokuthengwa kuphela kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani.
Kodwa nakwiwebhusayithi yenkampani kukho iingxaki. Inyaniso, Iifowuni ezininzi ze-HTC ziboniswe ukuba azikho, ngoko akunakwenzeka ukuzithenga. Esi sigqibo, esithi inkampani yeyethutyana, kuvakala ngathi linyathelo ngaphambi kokuba inkampani iphume kwintengiso yaseTshayina.
Kutshanje kutyhilwe ukuba icandelo leefoni lisekhona ukuvelisa izigidi zelahleko kwinkampani. Ngelixa amanye amacandelo, njengeVR ifumana iziphumo ezilungileyo. Kubonakala ngathi lilo kanye eli candelo leVR elomeleleyo lifuna ukukhuthaza kwimarike yase China kwikamva.
I-HTC ayikhange ithethe nto malunga nezicwangciso zayo zexesha elizayo e-China, kwii-smartphones. Kodwa intelekelelo malunga nokurhoxa okuqinisekileyo kwegama kuphawu lokuthengisa alupheli, ukusukela esi sibhengezo. Ngokwenxalenye ayisiyonto emangazayo, ukubona iziphumo zayo ezibi. Kuya kuba sengqiqweni ukuba babheje bajolise kwiimarike ezimbalwa apho bathengisa khona kakuhle.
Siza kujonga kwinto eyenzekayo kwiiveki ezizayo. Ngokukodwa ukubona ukuba imeko efanayo iyabhengezwa na kwamanye amazwe. I-HTC iphinde yaphinda ngaphezulu kwesihlandlo esinye injongo yabo yokuqhubeka nokwazisa iifowuni kwi-2019. Ukongeza, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwabhengezwa ukukhutshwa kwayo okokuqala kulo nyaka ngokusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-HTC iyeke ukuthengisa iifowuni e-China
I-OnePlus iqinisekisa ukucaciswa kwescreen se-OnePlus 7 Pro